Ukwethulwa kwesabelomali kungase kuvuse abaningi emaqandeni | News24
Ukwethulwa kwesabelomali kungase kuvuse abaningi emaqandeni
Cape Town - Yize kusavunguza umoya wethemba njengoba uMengameli Cyril Ramaphosa esanda kuthatha izintambo njengomholi wezwe, ukwethulwa kwesabelomali ngoLwesithathu kungase kuvuse abaningi emaqandeni.
Kulindeleke ukuba lesi sabelomali kube ngesinzima esizoza nokunyuka kwentela kanye nokufinyezwa kwesikhwama sokusebenzisa imali.
Nokho, ukukhula kwengcindezi kanye nokuba sengcupheni kwemali yabakhokhi bentela kanye nokungasetshenziswa kwayo ngendlela kuhamba nathi yonke le minyaka, ikakhulukazi kulandela izinxushunxushu ngoNgqongqoshe bezeziMali ngoDisemba 2015.
Amagama afana nokuthi izwe lidonsa kanzima, libhekene nezinselelo futhi lithwele kanzima yiwona ajwayele ukuzwakala uma kwethulwa isabelomali sezwe.
Abantu bakuleli bangalindela ukuthi kumenyezelwe ukunyuka kwentela, ukukhula komnotho kanye nokuncishiswa kwemali ezosetshenziswa.
Izinto zonakale kakhulu ngonyaka owedlule ngenxa yokushintshwa kongqongqoshe kulo Mnyango, kepha kubonakale inhlense yethemba kusukela kungene uRamaphosa ngoDisemba njengomholi we-ANC.